トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi ukukhetha ongaphakeme ukusetshenziswa izinga pachinko wamakhaza
Okwamanje ngivula umnyango wamakhaza pachinko, egcwele ithebula elingenalutho, ubungase umsindo isimo, futhi lokhu shop'll ugcine stop, ngicabanga ukuthi abaningi abangakholelwa uzizwe lapho kugadla. Kubukeka emgwaqweni, ngoba ukuhunyushwa ungenayo, awukwazi uphike ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona into ethile izingxenye ezifana yokuthengisa kanye kwamakhasimende futhi isevisi noma izimo indawo ,. Ukukhuluma yokuntula
ka sasemakhazeni pachinko enjalo, futhi kukhona itafula mahhala, okuyinto ithebula ngicabanga ukuthi kukhona yokuthi kunzima ukuqonda indlela ezinhle yesikhulumi. Uma indeterminate kuhloswe, eduke kuzokwenzeka, liyoba nzima ukunqoba. Ngisho noma baqoqe izinto ngoba abashisekeli futhi kwaphela, ulwazi enamandla futhi iyona nzima ukuthola.
ancike POP kanye amaphosta, njll, ngisho noma Semeyo imodeli ufake amandla, ngenxa yokuma singenamuntu kakhulu, futhi eziningi kakhulu ukuma ingavuli, umdlalo hit noma miss, ayisekho uyobanika wena baphoqeleka ukuba kuyoba.
khona, lithi ububi enkulu ongaphakeme ukukhiqizwa esitolo.
Nokho, izinzuzo ukuze sasemakhazeni pachinko enjalo ikhona. Ingxenye ukuthi ithebula elingenalutho egcwele, wena Maeru ukwandisa ematfuba ngokuwina ukusizakala yokuthi. Ngo wamakhaza pachinko zokukhiqiza ongaphakeme, ngakho kakhulu zigijimela bengeke bame likhulu, kukhona isikhathi ngezikhathi ezithile ukuhamba ezingalindelekile. Ungalahlekelwa kuya phezulu kuzo esitolo, futhi noma kukhona akhiqiza i wenkokhelo alufakwa.
itafula Hodai ufuna ukhethe, ezifana kuphela play kancane, amakhasimende ujwayelene pachinko kakhulu, eqinile ngakho uyabuthwa uyeza mkhuba, uma ukubhekisisa kahle emhlabeni, ngokuvamile futhi amakhasimende babema ngaphandle kokuvala kakhulu, uke. Futhi, uma uzama ukunqoba ukuqinisekisa esitolo, usuku nosuku iqoqo ezifana idatha ku ngaphezulu kuzo okusezingeni eliphezulu esitolo kuyoba ebalulekile.
ngisho Noma kunjalo, ngenxa yokuthi kuyinto emakhazeni pachinko hhayi ezinhle ekusebenzeni, ngoba kunzima ukufunda amagagasi ngamandla ukunyakaza ngamunye. Ngoba ukuhumusha ukuthi akasebenzisi, kukhona kungenzeka ukuthi ngisho ecaleni esitolo hhayi eqoqwe ngokugcwele by idatha kuhle.
ukusebenza eliphezulu Pachinko esitolo, kukhona ezihlukahlukene idatha esihle maqondana esitolo, kodwa ohlangothini esitolo ngeke inkambo kunenzuzo, e wamakhaza pachinko wokusebenza ongaphakeme, ngoba ukuhunyushwa ukuthi akasebenzisi, kungenzeka ukuba uyothenga ngaphezulu iqoqo idatha Sekuvele nesimo esinzima. I
okunemibandela wukuthi esitolo futhi Amakhasimende musa ukushintsha okuningi. Izitolo, noma ibholo nganoma isiphi isikhathi, zama ukubona omunye umkhuba ukubeka iqoqo. Ngisho nasezimweni lapho ukuphamba emakhazeni pachinko wokusebenza ongaphakeme, it is kusho ukuthi kungenzeka ukwandisa ematfuba ngokuwina. Nokho, nail iphuma kokuqina, ukubeka ngoba kukhona abaningi engikukhuluma zonke 1, uyophinde abe nesidingo ngokucophelela senzo.
kugwenywe ngu bavame, ongaphakeme ukugijima esitolo kodwa, Woza ukushintsha indlela yokucabanga, ngokuwina iphesenti phezulu futhi kungase kungabi iphupho. Labo okuthiwa hhayi kuphela pa o emakhazeni ukugijima ongaphakeme eduze, kungenzeka ukuthi Zama ngisho ezithakazelisayo ancintisane izitolo.
Nokho, ngokuyisisekelo imunce juice amnandi esitolo low-operation ingase ibe kubasebenzisi ethuthukile. Okwamanje, ibhalansi ngaphezulu kusilela, Kunconywa ukuba kabusha ukulinganisela yabo esitolo nge operation ezithile degree. Kungenzeka i-Sha. Okwamanje, ibhalansi ngaphezulu kusilela, Kunconywa ukuba kabusha ukulinganisela yabo esitolo nge operation ezithile degree. Kungenzeka i-Sha. Okwamanje, ibhalansi ngaphezulu kusilela, Kunconywa ukuba kabusha ukulinganisela yabo esitolo nge operation ezithile degree.